Teknụzụ - Shandong Lanbeisite Educational Equipment Group Co., Ltd.
Gini bu teknụzụ ederede ederede nke LONBEST LCD Blackboard?
Ihe odide ederede nwere okpukpu atọ, akwa elu bụ PET transperent ihe nkiri na ITO conductive oyi akwa n'otu akụkụ, etiti oyi akwa bụ ihe mejupụtara na mmiri mmiri kristal, na ala oyi akwa bụ PET na-abụghị transperent nwa ihe nkiri na ITO conductive oyi akwa na otu n'akụkụ. Ndị polymerizable monomers etisasịwo na mmiri mmiri kristal nwere ike jikọọ ngwa ngwa na netwọk polymer na mmiri mmiri kristal nwere ike etolite nhazi ọtụtụ site na njikọta ọkụ nke ọkụ ultraviolet na ọkụ infrared na oge ụfọdụ na ike. Ihe ngebichi ederede na-eme ka kristal mmiri na-etolite udiri ụgbọelu site na nrụgide mmetụ iji gosipụta ederede ma gbanwee ka ọ bụrụ ederede nematic site na voltaji etinyere, wee tụgharịa n'ime ntụgharị uche iji kpochapụ ederede na ihuenyo ahụ.
Kedu ihe kpatara anyi ji ede ogwe ojii nke LCD? Kedu uru dị na njedebe ndị ọrụ?
Omuma ọdịnala nke dabere na ederede nzu na-eweta ọtụtụ uzuzu n'usoro ederede na ihichapụ, nke na-etinye ahụike nke ndị nkuzi na ụmụ akwụkwọ n'ihe egwu. Idetu ihe na-acha uhie uhie na-erepịa ihe nrịbama na-egosi iwe iwe. Ilegide anya na ihe ngosi eletrọniki (ogwe ọkụ, ogwe aka LCD, bọọdụ kọmpụta, wdg) ogologo oge ga-eme ka ike gwụ anya ma mebie anya ụmụ akwụkwọ. LONBEST LCD Ederede bọọlụ doziri nsogbu ikuku ruru unyi. Nwere ike ide ihe ọ bụla siri ike na bọọdụ, ọbụnadị mkpịsị aka anyị.
Thekpụrụ ngosipụta nke bọọdụ E-ederede dabere na ntụgharị ọkụ nke mpụga, enweghị ọkụ elektrik; Anya adịghị egbu egbu, enweghị mgbakasị ọ bụla. A na-ahụ ihe odide ndị dị na bọọdụ ahụ site na mita 30 site na iche n'ihi oke ọdịiche. Ihe nlere ihu nke sara mbara na-eme ka a mata nke ọma site n'akụkụ ọ bụla nke ụlọ ahụ. Otu nchicha kpochie dochie ntuziaka iji chekwaa oge. E wezụga nke ahụ, ihichapu akụkụ dịkwa. Enwere ike ihichapụ isi ihe ọ bụla na bọọdụ ugboro ugboro 100,000. Site na iji ndoputa ozugbo na nnyefe, enwere ike imeputa ihe edere ahu wee chekwaa ya dika igwe ekwenti, laptọọpụ, nye ndetu ekwenti kwesiri ekwenye maka inyocha oge obula na ebe obula.
Olee otú anyị ịchịkwa ngwaahịa mma？
Ebe a na-eme ka ahịhịa ghara ịnwụ
Ekiri ike ule nke film akụrụngwa
Mpempe akwụkwọ nguzogide mpempe akwụkwọ ihe eji emepụta fim
Nnwale ule nke mmiri nke ngwaahịa arụpụtara ọkara
Nnukwu ule gburugburu ebe obibi
Eyi-eguzogide ule nke osisi elu
Nnwale simulation nke na-ebufe ụgbọ njem
Nnwale njiri mara ngwaahịa
Kedụ ihe anyị nwere maka bọọdụ edo edo LCD?
Etinye akwụkwọ ikike mba ụwa niile ： 52 & Nkwado ụwa niile World 23
LIQUID CRYSTAL Writing FILM, ,LỌ, Multit-Voltage Wepụ Usoro na Ọnọdụ CALỌ PPR OF NKE AKW ERKWỌ AKW PARTKWỌ
【발명 의 명칭】 부분 삭제 가 가능한 액정 라이팅 부분, 부분 삭제 방법 다중 전압 및 결정 결정
European Patent Organisation （EPO）
Council na-emekọ ihe banyere Gulf (GCC)
Akwụkwọ ikike ikike iwu a nyere gbasara ikpuchi mba 53
Pattù Ndị Ikike European European EPO）: Albania, Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg , Malta, Monaco, Onye bụbu Yugoslav Republic of Macedonia, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, UK, Bosnia na Herzegovina, Montenegro, Morocco, Republic nke Moldova.
Switzerland na Liechtenstein.
Mgbakọ na-ahụ maka nchekwa na Gulf (GCC): United Arab Emirates, Oman, Bahrain, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia.